ट्रायलमा ६० नम्बर आए सवारी लाइसेन्स ! | Sagarmatha TV
ट्रायलमा ६० नम्बर आए सवारी लाइसेन्स !
काठमाडौँ– सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिँदा सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) मा फेल हुन्छन् । लिखितमा पास भए पनि ट्रायलमा फेल हुने धेरै हुन्छन् । जसले गर्दा बिचौलियालाई मागे जति पैसा दिएर लाइसेन्स बनाउने बढेको पाइन्छ ।